အလံသစ်နဲ. ရန်ကုန်မြို.တော်ခန်းမ | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Myanma News » အလံသစ်နဲ. ရန်ကုန်မြို.တော်ခန်းမ
Posted by Bayote on Oct 21, 2010 in Myanma News, News | 31 comments
အလံပြောင်းလဲ လွှင့်တင်ပြီးဆုံးသွားပါကြောင်း ။ ။ ။ ။
အလံသစ်ရပြီဆိုတော့ မြို့တော်ခန်းမနဲ့ အမိုးတွေကို ဆေးသုတ်နိုင်ပါစေ.
အလံသစ်ပြောင်းလိုက်တော့ စိတ်ထဲမှာ တစ်မျိုးကြီးပဲ
အရင် အလံလေးနှမျောစရာ.. ဒီအလံကြီးကြိုက်ပါဘူး..
အေးဗျ. ဒိအလံမြင်ရတော့ ဗိုလ်ချုပ်ပေးခဲ့တဲ့ မြန်မာနိုင်ငံကြီး လွတ်လပ်ရေး ဆုံးရှုံးသွားသလို ခံစားရတယ်ဗျ. စိတ်ထဲမှာ မကောင်းတာတော့ အမှန်ပဲဗျ။တော်သေးတယ်။ နိုင်ငံတော် သီချင်းလေး မပြောင်းလို့။။။။
လှလည်းလှ ဘူး အလံကလည်း
အရင် အလံ ကမှ ………….
ရှင်းရှင်းဘဲ ဒီကျက်သတုံးအလံကြီး ငါတို့ အလံလို့ မသတ်မှတ်နိုင်ဘူး။ ကိုယ်သတ်မှတ်မှ ဖြစ်တာ။ သူတို့ မြို့တော်ခန်းမ မကလို့ သူတို့ ဖင်မှာ စိုက်စိုက် လုံးဝ အသိအမှတ်မပြုဘူး။ စောင်ကောင်စုပ်တွေ လုပ်ချင်တာ လုပ်နေကြတာ။ အဲဒီအလံကို ရရင် မီးပထမဆုံး ရှို့ပစ်မှာ…
ဒီအဆိုကိုထောက်ခံတယ်ဗျာ…။ အလံကိုက ကြတ်သရေကိုမရှိဘူး.။
အလံက အာဖရိက တိုက်က တိုင်းပြည်တွေရဲ့ အလံတွေနဲ့သွားတူနေတယ်။ ကင်မရွှန်းတို့ ဘာတို့နဲ့လေ…။ ကကြောင်ကကျား အရောင်နဲ့ဗျာ..။ ဒါလဲ စစ်အစိုးရ ရဲ့ ယတြာချေနည်းတစ်မျိုးပဲလားတော့မသိဘူး
သန်းရွှေရဲ့ယဒယာဆေးမန်းဘဲ တတိုင်းပြည်လုံးစိတ်တိုင်းကြလုပ်နေတဲ့ကောင်ကျဆုံးမဲ့နေ့နီးလာပြီ November7မှာ တနိုင်ငံလုံး ရွေးကောက်ပွဲကိုသပိတ်မှောက်ကြမယ်
ရင်ထဲမှာ တကယ် ၀မ်းနည်းလွန်းလို့ comment ၂ခါပြန်ရေးလိုက်တာ… အရင်အလံလေးက မြန်မာနိုင်ငံသားတွေအားလုံးရဲ့ ရင်ထဲမှာ ဘယ်လိုမှဖျောက်လို့ ရမှာမဟုတ်ပါဘူး… !_!
အလံပြောင်းတော့ အလောင်းပျံ တော့မှာ ပေါ့။
အလံကိုချဉ်းဘဲမလွမ်းနေကြနဲ့ လေ သူ့ ဖာသာ ထမီအလံထောင်လည်းအရေးမကြီးဘူး
သူထောင်လို့ ရတဲ့ အကြောင်းကိုတွေ့ အောင်ကြည့်ကြလကွာ
ဆရာကြီး ယှဉ်ပြိုင်ပါတီ အမတ်လောင်းတွေရယ်လို့ ဒီလောက်မတရားဖြစ်နေတဲ့ရွေးကောက်ပွဲထည်းကနေ
နှုတ်ထွက်ဘို့ အချိန် အနည်းငယ်ယ်ယ်ယ်ယ်ယ် ကျန်ပါသေးတယ်လို့ 
မြန်မာပြည်အနာဂတ်တွက် ဂက်စ်တွေကို နှစ်သုံးဆယ်စာချုပ်နဲ့ တရုတ်ကို ရောင်းထားပြီးပါပြီလို့ 
နှစ်သုံးဆယ်ပြည့်ရင်လည်း ဗွက်တွေဘဲထွက်ပါတော့မယ်လို့ 
ပိုင်တဲ့လူတွေကလည်း ဆိုင်ရာ ဘိုးတော်တွေ ကိုကြီးကျော်တွေ ၃၇ မင်းတွေနဲ့ ဘေထိဘေထိလုပ်ကြည့်ပေါ့
သတ်မှတ်ပြီးပြီဆိုတော့လဲ ဘယ်တတ်နိုင်မလဲ …
ကျွန်တော့်တို့တစ်သက်လုံး အလေး ပြု လာ တဲ့အလံက နိုင်ငံတော်ရဲ့
ဆန်စပါး ၊ စက်မှု နဲ့ ပြည်နယ် နဲ့ တိုင်းကြီး ၁၄ ခုကို ကိုယ်စားပြုထားတာလေ
အခု ကော သုံးရောင် ခြယ် နဲ့ ကြယ်ဖြူ ကြီးက ဘယ်လိုအဓိပ္ပါယ် မျိုးလဲ ဆိုတာ သိချင်ပါသေးတယ် …
သိတဲ့သူများက မသိသေးတဲ့ကျွန်တော်ကို ပြောပြပေးပါဦး ….
ကြယ်စင် ၁၄ လုံးနဲ့ အလံကိုတော့ ထာဝရ လေးစားနေမှာပါ …
အဲဒါကြီးကို… မြန်မာပြည်သူတွေဖြစ်တဲ့..ခင်ဗျားတို့ပဲ… အခြေခံဥပဒေဆိုတာကြီးနဲ့အတူတူ…နာဂစ်ဖြစ်ပြီးခါစတင်..မဲပေးအတည်ပြုပေးလိုက်တာလေ..။
၉၂.၄ ရာခိုင်နှုန်းနဲ့အတည်ပြုတာဆိုတော့..ဒီမှာစာလာရေးနေသူတွေထဲမှာတင်..မြန်မာပြည်ကဆိုရင်… လူ၁၀ယောက်မှာ ၉ယောက်ကထောက်ခံထားတာ..တဲ့..။
အဲဒီတုန်းက ကျွန်တော်ဖြင့် ကြက်ခြေခက်ကြီးကြီးကို ပေးခဲ့တာပါဗျာ။
ဘယ်လိုလုပ် ပြောင်းသွားလဲ မသိတော့ ပါဘူး တကယ်ပါဗျာ။ အဲဒီ အမျိုးသားညီလာခံ ကိုယ်စားလှယ်ကြီးတွေထဲမှာ ကျွန်တော့ကို ကိုယ်စားပြုတဲ့ သူဆိုလို့ တယောက်မှ မပါပါဘူးဗျာ။ ခင်ဗျား ကိုယ်စားလှယ်လည်း ပါမှာ မဟုတ်တာသေချာတယ်။
အလံတွေထဲမှာ ပြည်ထောင်စုအလံကိုဘဲကြိုက်တယ် ဦးနေ၀င်း စပါးနှံ စက်သွားအလံလည်း မကြိုက်ဘူး။ ကြယ် ၅ လုံးနဲ့ ပြည်ထောင်စုအလံကမှ မြန်အပြည့်ပါတာ။ ကျွန်တော်ကတော့ အခုချိန်ကစပြီး ကိုယ်နိုင်ငံအလံဟာ ကြယ် ၅ ပွင့်နဲ့ ပြည်ထောင်စုအလံကိုဘဲ နိုင်ငံတော်အလံလို့သတ်မှတ်တယ်။ သူတို့တွေတောင် သူတို့ သတ်မှတ်ချင်တာ သတ်မှတ်တာ ကိုယ်လည်း ကိုယ်သတ်မှတ်ချင်တာ သတ်မှတ်မှာဘဲ။ ဟုတ်ဘူးလား။
၀မ်းနည်းလွန်းလို့ ကွန့်မန့်ကို (၂) ခါကို ပြန်ရေးပြစ်တာပါဗျာ။ ဒီပို့ ကို hot အဖြစ်ဆုံး ဖြစ်အောင် တင်ကြစို့လား။
ဝါ၊စိမ်း၊နီ ဆိုတော့ အလံနဲ့ မတူပဲ မီးပွိုင့်ကိုကြည့်နေရသလိုပဲ။
တကယ် ..ရင်ထဲမှာတစ်မိူးကြီးခံစားနေရတယ်။အေးလေ…သူတို့ခတ်က မကုန်သေးဘဲ။
ဒီအလံကို အလေးပြုခိုင်းရင်…..တို့ကတော့နိုးဘဲ …….အာဖ၇ိက က အလံ ကို ခိုး လာတာနေမှာ ။
ကိုယ့်နိုင်ငံအလံကို သူများဒီဇိုင်း ခိုးချထားတာနေမှာ ။
ကင်မရွန်း အလံ နဲ့ဆင်သလားလို့ ။
အဲလိုကူးချထားရင်တော့ ဒို့နိုင်ငံလဲ သူများနောက်ရောက်နေတာပေါ့ ။စောင့်ကြည့်နေနိုင်ငံတော်သီချင်းလဲမကြာခင်ပြောင်းမှာ။
၀ါ၊စိမ်း၊နီ ရဲ့အကြောင်းကိုထင်သလောက်ပြောရရင်တော့ ……အ၀ါ ကတော့…..ရွှေ ပေါများရမယ်ပေါ့။အစိမ်းက ကျောက်စိမ်းပေါရမယ်။အနီကတော့ ပတ္တမြားပေါ့ရမယ်တဲ့ အလယ်ကကြယ်လေးကတော့……………အကုန်လုံးသူတို့ လက်ထဲမှာတဲ့….။
ခေတ်သစ် သင်ပုန်းကြီးဖတ်စာမှာ ထပ်တွေ့ရမယ့် စာသားအသစ်
“လ …….. အလံ ……… အလေးပြု………ေ-ွးဥ”
(ရိုင်းသွားသလိုဖြစ်ရင်တော့ ခွင့်လွှတ်…………. )
ဒါငါတို့အလံ တဲ့….. ယတြာအလံလေ …. ရှက်စရာကြီး. ….. ဆင်းစရာရှိမြန်မြန်ဆင်းပေးတာမဟုတ်ဘူး ….. နိုင်ငံတော် အလံ ဖျက်ဆီးမှု ပုဒ်မ …. ၁၆ နဲ့ထပ်အစွဲ ခံ ချင်သေးတယ် ….
ယတြာအလံလေ …. ရှက်စရာကြီး. ….. ဆင်းစရာရှိမြန်မြန်ဆင်းပေးတာမဟုတ်ဘူး ….. နိုင်ငံတော် အလံ ဖျက်ဆီးမှု ပုဒ်မ …. ၁၆ နဲ့ထပ်အစွဲ ခံ ချင်သေးတယ် ….
အလံသစ်မှာပါတဲ့ အ၀ါရောင်က ဘာသာ၊ သာသနာနဲ့ ပညာတိုးတက်ခြင်း၊ အစိမ်းရောင်က စပါးဆန်ရေ၊ ကျွဲနွားနဲ့ အထွေထွေပေါများခြင်း၊ အနီရောင်က ရဲရင့်သော စိတ်ဓာတ်ခွန်အား၊ အဖြူရောင်ကြယ်က ပြည်ထောင်စုကို ကိုယ်စားပြုတယ်လို့ သိရပါတယ်။ ဒီအလံကို ကြည့်ရတာ နဲနဲမှ ကျက်သရေ မရှိဘူး။ အရင်အလံကိုကြည့်လိုက်ရင် ရဲရင့်တဲ့စိတ်တွေ ဖြစ်ပေါ်လာတယ်။
လောလောဆယ်တော့ ဘာအလံဖြစ်ဖြစ် .. ဒါပေမယ့် .. အစိုးရသစ်တက်ပြီးမှ တင်ရမှာလေ .. တစ်ခုတော့ ရှိတာပေါ့ .. အစိုးရသစ်မှာ အများစု ဖြစ်ပြီး အုပ်ချုပ်မယ့်သူက သူတို့တွေ ဆိုတာ သေချာနေတော့ စောစောစီးစီး အောင်မြင်နေကြောင်း ပြတာပါ .. ဒါပေမယ့် အလံဟောင်းကို မီးရှို့ပစ်တယ် ဆိုတာ တွေ့လိုက်ရလို့ တကယ် အမှန်ဆိုရင် အဲဒါတော့ မကောင်းဘူးလို့ ထင်ပါတယ် .. မသကာ မော်ကွန်းတိုက်မှာ သိမ်းဆည်းထားရမယ့် အခြေအနေလို့ ထင်ပါတယ် ..
ကြယ်ဖြုတ်လိုက်ရင် Lithuaniaအလံပါပဲ..ကြယ်တစ်လုံးပဲပိုတာပါ…မယုံရင်googleကနေ ရှာကြည့်နိုင်ပါတယ်။